Faah-faahin cusub oo ku saabsan Injineeradii Turkiga ee qaraxii maanta Ex-kontrol Afgooye ku dhintay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin cusub oo ku saabsan Injineeradii Turkiga ee qaraxii maanta Ex-kontrol Afgooye...
Faah-faahin cusub oo ku saabsan Injineeradii Turkiga ee qaraxii maanta Ex-kontrol Afgooye ku dhintay
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya Qaraxii Ismiidaaminta ahaay ee ka dhacay Isgoyska Ex control Afgooye ee Magaalada Muqdisho, waxaana dadka ku dhintay ka mid ahaay Ajaanib.
Laba Injineer oo ka shaqeynaayay dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa ku dhintay Qaraxaasi, waxaana ay saarnaayeen gaariga oo qaraxa markii uu dhacay meesha maraayay.
Saraakiil ka tirsan hay’adaha ammaanka dowladda ayaa waxa ay sheegeen inay suuragal tahay bartilmaameedka qaraxa uu ahaay Injineeradaasi u dhashay dalka Turkiga.
Injineerka guud ee dhismaha wadada ku hawlan oo saarnaay gaariga aan xabada karin ayaa ka badbaaday Qaraxaasi, waxaana ku dhaawacmay darawalkii gaariga waday.
Labada Injineer ee dhimatay ayaa la geeyay maydkooda Isbitaalka Digfeer ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo Saraakiisha Safaarada Turkiga ay ugu yimaadeen maydadka.
Qaraxii Ismiidaaminta ahaay ee saaka ka dhacay Isgoyska Excontrol ayaan illaa iyo hadda la haynin tiro sax dadkii ku dhintay, waxaana dhimasho iyo dhaawacyo kala duwan la geeyay Isbitaalada Muqdisho.
Faahfaahin injineerada Turkiga ee ku dhintay qaraxii Ex Kontrol Afgooye